बुर्का लगाउन सक्छिन् मलालाले ! « Sansar News
अरु पाकिस्तानी केटी जस्तै मलाला युसुफजाईले पनि २४ वर्षको उमेरमा बिहे गरिन् । त्यसैले अब अन्य आम श्रीमतीजस्तै उनी पनि श्रीमान् र छोराछोरीको हेरचाहमा व्यस्त हुनेछिन् । मलालाका श्रीमान पाकिस्तानी हुन् । पाकिस्तानका पुरुषहरू पुरुषतान्त्रिक माहोलमा हुर्के बढेका हुन्छन् । उनका श्रीमानले पनि उनलाई आन्दोलित भईरहन सायदै सहयोग गर्नेछन् ।
मलाला कुनै साधारण केटी होइनन्, उनी दुनियाका करोडौं केटीहरुका लागि ‘आइकन’ जस्तै हुन् । विश्वमा लगभग १३ करोड यस्ता केटीहरु छन् जो पढ्न र लेख्नको अवसरबाट निकै टाढा छन् । ती करोडौं केटीहरूको लागि शिक्षाको व्यवस्था गर्नु ठूलो काम हो। सामान्यतया, सम्पूर्ण जीवन खर्चिएपछिे मात्रै नोबेल शान्ति पुरस्कार केहीले प्राप्त गर्न सक्छन् । तर मलाला तालिबानको गोलीबाटै चर्चित बनेकी थिइन् । मलाला युसुफजाईले ठूलो काम गर्नु अघि नै जीवनको सुरुमै नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकी थिइन्। यस्तो अवस्थामा मलाला आम केटीहरूको लागि शान्ति र शिक्षा स्थापना गर्ने अभियानमा जीवनभर लाग्नु उपयुक्त थियो । मलालाले शिक्षा हासिल गर्न पाएको अवसर विश्वका अधिकांश केटीले पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा मलालाले पाएको अवसरको सदुपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। अहिले प्रश्न उठेको छ, के अब विश्वभरका केटीहरूले मलाला युसुफजाईबाट साँच्चै केही सिक्ने अवसर पाउँछन् त ?
पिछडिएको समाजमा बालिकाको विवाह सानै उमेरमा गरिन्छ र विवाहपछि उनीहरु श्रीमान र घरमै सीमित हुन्छन् । मलालाले आफ्नो उदाहरणले यो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्थिन् । तर उनको बिहे र घरजम गर्ने निर्णयबाट त्यस्तो लाग्दैन । मलालाले आफू विवाह प्रणालीमा विश्वास नगर्ने र मानिसहरूले किन बिहे गर्छन् भन्ने कुरा पनि नबुझ्ने बताएकी थिइन् । यो भनेको तीन महिनामै मलालाले आफैंले विवाह गरिन् । त्यसोभए, मलालाको शब्दमा कत्तिको विश्वास गर्न सकिन्छ त ? मलालाको विवाहले महिला शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो आन्दोलन गर्ने अपेक्षा गर्नेहरूलाई निराश तुल्याएको हुनुपर्छ।
मलालाले आफू विवाह प्रणालीमा विश्वास नगर्ने र मानिसहरूले किन बिहे गर्छन् भन्ने कुरा पनि नबुझ्ने बताएकी थिइन् । यो भनेको तीन महिनामै मलालाले आफैंले विवाह गरिन् । त्यसोभए, मलालाको शब्दमा कत्तिको विश्वास गर्न सकिन्छ त ? मलालाको विवाहले महिला शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो आन्दोलन गर्ने अपेक्षा गर्नेहरूलाई निराश तुल्याएको हुनुपर्छ।
यद्यपि कतिपयले विवाह मलालाको व्यक्तिगत मामिला भएको भन्दै यसमा आपत्ति जनाउने अधिकार कसैलाई नहुने पनि बताएका छन् । मलालाको विवाह जबरजस्ती गरिएको पनि होइन । मलालाले आफ्नो पतिको रूपमा रोजेको मान्छे असल मान्छे हो, होइन भन्ने निष्कर्षमा अरु पुग्न आवश्यक पनि छैन् । मलालाको व्यक्तिगत जीवनमा टिप्पणी गर्न आवश्यक पनि छैन् । विवाह गरिसकेपछि पनि मलालाले महिला शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेर आफ्ना आलोचकहरूलाई अस्वीकार गर्न सक्छिन्। मलालाले नारी शिक्षाका लागि आन्दोलित भए पनि जीवनमा प्रेम र विवाहजस्ता सम्बन्धलाई त्यागेर सन्यासीको जीवन जिउनुपर्छ भन्ने होइन । बरु श्रीमानको साथ पाए भने मलालाले आफ्नो जीवनमा ठूलो काम गर्न सक्छिन्, ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छिन् ।
मलाला युसुफजाई भविष्यमा पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छिन् भन्ने विश्वास गर्नेहरू पनि छन्। यसका लागि जति गुणहरू चाहिन्छ, मलालाले ती सबै दिईरहेकी छिन् । उदाहरणका लागि, उनी सधैं सामान्य मानिसहरूको अगाडि आफ्नो टाउको छोप्छिन्। उनी आफ्नो हरेक भाषण अल्लाहको नामबाट सुरु गर्छिन्। त्यही भएर उनले पाकिस्तानीसँग बिहे गरेका हुन् । यसैको परिणाम पाकिस्तानका परम्परावादीहरूले मलालालाई माया गर्न थालेका छन् ।
मलालाका बुबा आफैं पनि उनलाई पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहन्छन्। पाकिस्तानीहरूको जीवनमा क्रिकेटको ठूलो महत्त्व भएकोले मलालाले जानाजानी क्रिकेटसँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिलाई आफ्नो पतिको रूपमा रोजेकी छिन्। यति मात्र होइन, मलालाले भर्खरै भएको टी–२० विश्वकपमा पाकिस्तानले भारतमाथि जित हासिल गरेकोमा पतिसँग केक पनि काटिन् ।
जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ, सत्य यो हो कि मलाला युसुफजाईले यति कम उमेरमा विवाह गर्ने निर्णय गर्छिन् भन्ने मैले कहिल्यै सोचेको थिइन। मलालाले अक्सफोर्डबाट स्नातक गरेकी छिन् । कतिपयले भने उनले थप अध्ययन गर्ने बताएका छन् । तर, विवाहपछि मलालाको पढाइ अघि बढ्न नसके मलाई अचम्म लाग्दैन । मलालाले भविष्यमा बुर्का लगाएर हिँड्न थालिन भने पनि मलाई अच्चम लाग्दैन् ।
याद राख्नु पर्ने अर्को कुरा के छ भने विश्वभर अन्यायको आवाज उठाउँदै आएकी मलालाले कश्मीरी पण्डितहरूको विस्थापनबारे कहिल्यै केही बोलिनन् । वास्तविकता यो हो कि मलाला एक परम्परावादी महिला हुन् जसलाई पश्चिमाहरूले प्रसिद्ध बनाएका छन्। त्यसैले धर्म र परम्परामा बाँधिएकी महिलाबाट योभन्दा बढी आशा गर्नु हुँदैन । टाउको पल्लु नहटाउने बेनजिर भुट्टो पनि अन्ततः कट्टरपन्थीको गोलीको सिकार भइन् भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा मलाला प्रधानमन्त्री बनिन् भने उनी फेरि तालिवानको निशानामा आउन सक्छिन् ।
जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ, सत्य यो हो कि मलाला युसुफजाईले यति कम उमेरमा विवाह गर्ने निर्णय गर्छिन् भन्ने मैले कहिल्यै सोचेको थिइन। मलालाले अक्सफोर्डबाट स्नातक गरेकी छिन् । कतिपयले भने उनले थप अध्ययन गर्ने बताएका छन् । तर, विवाहपछि मलालाको पढाइ अघि बढ्न नसके मलाई अचम्म लाग्दैन । मलालाले भविष्यमा बुर्का लगाएर हिँड्न थालिन भने पनि मलाई अच्चम लाग्दैन् । अमर उज्यालाबाट
स्वास्थ्य सेवा सहकारी र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक